Ukhenketho lwaseMexico luKhathazwe ziiNqobo eziNgafunekiyo zokuHamba zase-US
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseMexico zokuPhula » Ukhenketho lwaseMexico luKhathazwe ziiNqobo eziNgafunekiyo zokuHamba zase-US
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iintlanganiso • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Shopping • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukhenketho lwaseMexico lwenzakaliswe ngumqobo ongabalulekanga kuhambo lwase-US
Ngelixa uRhulumente waseMexico evumela ukuhamba kweli lizwe, izithintelo kuhambo oluphumayo luyasetyenziswa yi-US.
IMexico inokuziva ilahleko yabahambi baseMelika njengoko izithintelo ze-COVID-19 ziqhubeka
Ngo-2020, i-US ichithe eyona nkcitho kukhenketho oluphumayo kunye nenkcitho ephakathi komhlali ngamnye eyi- $ 3,505.
ICanada yayiyeyona ndawo yesibini yentengiso yemithombo ephezulu eMexico ngeedola ezili-1,576 ngomhlali ngamnye.
IColombia yayiyeyona ntengiso yesithathu iphezulu yemithombo yentengiso ene- $ 1,286 ngomhlali ngamnye.
Ukuhamba okungabalulekanga ngaphesheya komda womhlaba phakathi kwe-US neMexico ihlala ithintelwe Iinyanga ezili-17 ukusukela ekuqaleni kobhubhane we-COVID-19 kwaye oku kunokuba njalo iimpembelelo ezonakalisayo kuba Icandelo lezokhenketho laseMexico.
Ingxelo yamva nje ityhila ukuba kwi-2020, i US uchithe uninzi kuhambo oluphumayo kunye nomndilili wenkcitho ngomhlali ngamnye eyi- $ 3,505. Khanada yayiyindawo yesibini yentengiso yemithombo ephezulu nge $ 1,576, ilandelwa yiColombia nge $ 1,286.
Ngelixa uRhulumente waseMexico evumela ukuhamba kweli lizwe, izithintelo kuhambo oluphumayo luyasetyenziswa yi-US. Kuba i-US yeyona ndawo isetyenziswa kakhulu kwintengiso yabakhenkethi, ikakhulu ngaphambili kwezinye iimarike zemithombo ebalulekileyo ezinje ngeArgentina, iColombia ne-UK, ishishini lezokhenketho laseMexico liya kuziva uthintelo lohambo olungabalulekanga oluvela e-US.
Ngokophando lwakutsha nje, abahambi bazimisele ukuhamba uhambo olude, olunokuthi iMexico lukwazi ukuthembela kulo. Olu phando lufumanise ukuba kubantu abali-1,442 kwihlabathi liphela, i-37% ithe bazimisele ukuthatha uhambo oluya kwilizwekazi elahlukileyo. Kwixesha elifutshane, ishishini lezokhenketho laseMexico linakho ukuxhomekeka kwimarike yeholide ende, ijolise kubasindisi bendyikitya abafuna 'uluhlu lwamabhakethi', uhambo lwasemva kwe-COVID-19.
Nangona kunjalo, icandelo lezokhenketho lisengasokola ke ukubuyisa ilahleko yomhambi ochitha imali eninzi wase-US. Ngo-2020 iipesenti ezingama-83 zabo bonke abafika eMexico babevela e-US, bebonisa ukuthembela kwelizwe kwimarike ephumayo yase-US.
Ngaphandle kwezithintelo ezikhoyo, iMexico inokufumana amava okundwendwela abahlobo kunye nezihlobo (i-VFR) ukusuka e-US xa ivunyelwe ngokupheleleyo, kuba le yeyona nto iphambili ekukhuthazeni ukuhamba phakathi kwala mazwe mabini. Kodwa abahambi banokufumana ukunyuka kweendleko zomoya ngenxa yokunyuka ngokukhawuleza kwemfuno. Nangona kunjalo, umnqweno wokubona abo ubathandayo emva kwexesha elide kuya kubakhuthaza abahambi ukuba bahlawule la maxabiso aphezulu, baxhamle iinqwelomoya.